Faritra Anosy sy Androy: natao andrana ny kavin’omby elektronika | NewsMada
Nihaona tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana ny olobe ary ny mpisehatra samihafa amin’ny omby ny tale jeneralin’ny Fiompiana, ny 14 jona teo tany Taolagnaro. Noresahina ny tetikasa vaovao hamantarana ny omby sy ny fiarovana azy.
Fotoana nihainoana mivantana ny hetahetan’ny mpisehatra amin’ny omby izany, sady namantarana ny tena zava-misy eny ifotony. Nohazavain’ny tale jeneraly, Andriamahatola Lezoma Tsiry, ny lalàna mikasika ny omby sy ny biby miraok’ahitra. Teo koa ny fomba vaovao hamantarana ny biby tsirairay (Lits*), hapetraka any amin’ny faritra efatra (Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Ihorombe). Anisan’ny tetikasa vaovao fisandratana (NPE) ao anatin’ny drafitra fisandratana ho an’ny tapany atsimon’i Madagasikara (PEM Sud) izany.
Navoitran’ireo solontenan’ny mpiompy omby any amin’ny kaominina Ankaramena sy Manambaro, anisan’ny tsenan’omby lehibe any amin’ny faritra Anosy ny sakana samihafa any an-toerana. Toy ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny biby, ny tsy fahampian’ny dokotera mpitsabo biby nahazo fankatoavana, ny tsy fisian’ny toerana manokana fanaovana vaksiny, sns. Anisan’ny vahaolana nomen’ny tale jeneraly ny Mpiompy manampy amin’ny asa veterinera (MMAV). Mikasika ny bokin’omby, nampahafantarina ny kavin’omby elektronika vaovao sy ny karatra kely (puces) tsy azo atao hosoka.
Niaiky i Niha Gilbert, mpiompy omby any Ankaramena, fa « namantarana ny olanay ity fihaonana ity ary hanampy betsaka amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny omby ny vahaolana nomena».
Noraisina ny soso-kevitra samihafa
Natao andrana tany amin’ny kaominina Ankaramena ny fampiasana ny famantarana ny omby tsirairay, Lits. Soso-kevitra naroson’ny ben’ny Tanàna, Rtoa Attalah Arline, ny hampihenana ny habetsahan’ny fanafody sy ny lanja ary ny haben’ny kavina ho an’ny omby tanora. Nanampy izany ny DG Andriamahatola Lezoma Tsiry mikasika sakafom-biby sy ny fanatsarana ny karazan’omby.
Dingana manaraka amin’ny tetikasa Lits, ny fampiofanana ny mpisehatra rehetra sy ny fanaraha-maso ny fifindran-toeran’ny omby. Voakasik’izany ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny kaominina ary ny mpitandro filaminana. Hametraka ny kavin’omby elektronika ny veterinera raha vao tonga any an-toerana izany. Nilaza Rtoa Mounira Mayet, tale jeneralin’ny orinasa Bovima, fa “tsy manan-tsafidy isika, tsy maintsy fantarina ny mombamomba ny biby sy ny toerana niaviany tsirairay raha hivarotra sy hanondrana any ivelany. Fepetra takin’ny firenena hanondranana ny vokatra izany”.
Tsiahivina fa anisan’ny nambaran’ny minisitry ny Fambolena, Ranarivelo Lucien, nandritra ny fikaonan- doha fisandratan’ny tapany atsimon’i Madagasikara, ny 11 sy ny 12 jona, ny fanatsarana ny fiompiana omby. Ao anatin’izany ny toerana fanatavezana (Feedlot) any Anosy sy Androy, izay hiteraka asa 20.000.